I-25 YEENWELE EZIPHAKAMILEYO EZIPHAKAMILEYO NEZIQINISEKILEYO ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ukucheba kweenwele eziphakamileyo kunye nokuqinileyo
Iinwele eziphakamileyo nezixineneyo zamadoda ziyasebenza, zinestayile kwaye kulula ukuzifumana. Ikhuthazwe yimikhosi yokucheba iinwele emkhosini eqala emva kwiinkulungwane, ukuphela okuphezulu nokuxineneyo kukudala…
Iinwele eziphakamileyo nezixineneyo zamadoda ziyasebenza, zinestayile kwaye kulula ukuzifumana. Uphefumlelwe yimikhosi yokucheba iinwele zomkhosi ezisusela emva kwiinkulungwane, ukuphela okuphezulu kunye nokuqina kuyiklasikhi kwindlela yayo emfutshane nasemacaleni okuseta iinwele. Ngelixa ingeyoyeyona inwele ihambelanayo ngokubhekisele kwisitayile, umkhosi ophakamileyo kwaye uqinile wenza ubuncinci bawo ngokubonelela ngononophelo olusezantsi, olusebenzayo lokucheba iinwele kubafana.
Ukusuka kwiingcali zeshishini ukuya kwiimbaleki ukuya elwandle, iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo zilungele abo bafuna iinwele ezinqunqiweyo kodwa ingezizo iintloko ezichetyiweyo okanye ezichetyiweyo. Funda ukuze ufunde ukusika okuphezulu kwaye okuqinileyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuphela kunye nezitayile ezide ezinde ezinokuhamba nale nwele yamadoda imfutshane.
1Yintoni iNwele ePhakamileyo neNgqingileyo?
MbiniYintoni endiyifunayo kwabaPhezulu nabaPhezulu?
3Ungayisika njani iNwele ePhakamileyo neTight
4Izitayile eziPhakamileyo eziPhakamileyo kunye eziQhelekileyo
5I-Buzz Sika ngoFele oluPhakamileyo
6Ulusu oluphezulu luphela kunye neCandelo elifutshane
7Ukuphela okuphezulu ngokusika okufutshane kweCrew
8I-Mid Fade eneNxalenye eNzima kunye neBrashi ephezulu
9Ephakamileyo kunye neTight Fade kunye neCrew Cut
10Ulusu luphela kunye neNqaku elifutshane eliPhezulu
Shumi elinanyeUkuphela kweBald kunye neenwele eziMhluziweyo
12I-Butch Sika ngeendevu
13Inxalenye enzima iphela ngesiVuno saseFrance
14Ulusu oluPhakamileyo kunye oluQinisekileyo
Shumi elinantlanuI-Burr Sika ngeBald Fade
16Ulusu olusezantsi luphela kunye noMfutshane oPhezulu
17Ukuphela okuphezulu ngeBuzz Sika
18Ukuphela okuphezulu kunye neWavy Brushed Back Hair
19Amacandelo achetyiweyo ngeBuzz Sika phezulu kunye noyilo lweenwele
Amashumi amabiniUlusu luyaphela kunye neCandelo eliNzima
amashumi amabini ananyePhakathi kweBald Fade kunye noMfutshane kakhulu
Yintoni iNwele ePhakamileyo neNgqingileyo?
Ukuphakama kunye nokuxinana yiklasikhi, iinwele zomkhosi ezijolise ekugcineni iinwele ezimfutshane ngaphandle kokubonakala ngathi yiSpartan okanye ibland. Ngokusisiseko, amacala ayanqunyulwa kwaye aphela kubude obufutshane kakhulu ngelixa iinwele ezinde zishiyekile entloko. Ngokufana namacala amafutshane anamhlanje, iinwele ezinde eziphezulu, ukuphela okuphezulu kunye nokuqina kunika iiyantlukwano ezininzi.
Ukusikwa kujongeka kukuhle ngobuso bobuso, kwaye kunxitywe ngabantu abadumileyo kubandakanya uDavid Beckham kunye noBrad Pitt. Ubuso besikwere ngamanye amaxesha bunokubonakala bubanzi kakhulu ngokunqunyulwa, ke qiniseka ukuba uyithathele ingqalelo indlela eza kulungela ngayo ubuso bakho ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokusikwa.
Yintoni endiyifunayo kwabaPhezulu nabaPhezulu?
Akukho nto iyimfuneko yokufumana iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo emadodeni. Nangona kunjalo, uzakufuna ubuncinci intshi yeenwele ngaphezulu kwentloko yakho ukunqanda ukufumana i-buzz cut elula. Ngaphandle koko, akukho mveliso ekhethekileyo yokuthambisa iinwele eyimfuneko.
Ukuba ucwangcisa ukusika okuphezulu kwaye uziqinise ekhaya, qiniseka ukuba unesihlangu esisebenzayo seenwele ezinoonogada abasukela # 0 kuye # 5, nangona ubukhulu becala ufuna ubukhulu be- # 0, # 1, kunye # 2 . Oku kuyakunceda ukuba uphele ngokufanelekileyo okanye ufumane ubude bokunqunyulwa okufunayo.
Nangona imveliso ingeyomfuneko kulungiso lweenwele, ukuba nazo ipomade , i-putty okanye i-wax ejikeleze ngokuqinisekileyo ayinakulimaza. Ukufaka imveliso yeenwele kwisitayile, nangona imfutshane, inokunika ukukhanya kwaye ibambe i-sleeker, ngakumbi ukubonakala kwesitayile kufanelekile emsebenzini okanye kubomi bakho boluntu.
Ungayisika njani iNwele ePhakamileyo neTight
Iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo zinenwele ezichetyiweyo ezijikeleze amacala entloko ngeenwele ezinde ngaphezulu. Ngokubanzi, umahluko wokusikwa okuphezulu kunye nokuxinana kujongeka ngcono kukufiphala kwesikhumba.
Ukufumana iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo, iinwele zakho ziya kuqala ngokusebenzisa izixhobo zokucheba iinwele ukucima amacala. Iinwele zakho ezisecaleni kufuneka zisikwe kubude be- # 0 ukuya kwi # 3, ngelixa iinwele ezingaphezulu ziya kusebenzisa ubukhulu # 3 ukuya ku # 5.
Inxalenye ekhohlisayo yokucheba iinwele kukususa ifade ecocekileyo, eqinileyo; Ngaphandle koko, ukusebenzisa ii-clippers ukwenza i-buzz iinwele kuko konke okufuneka ukwenze ukuze usikwe.
Izitayile eziPhakamileyo eziPhakamileyo kunye eziQhelekileyo
Iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo zamadoda zinokuba zombini zilula kwaye zinesitayile. Ngenxa yokuba ukusika kunokuba nzima ukucinga ngaphandle kokubona imifanekiso, siqokelele igalari yezona ndawo zintle kakhulu nezomeleleyo kwi-intanethi. Nokuba ukhetha isitayile somkhosi okanye ukuphela okuphucukileyo okuphezulu kwanokuxineneyo, cinga zonke iinketho zakho ngaphambi kokufumana iinwele ezimfutshane kakhulu zamadoda.
I-Buzz Sika ngoFele oluPhakamileyo
Ulusu oluphezulu luphela kunye neCandelo elifutshane
Ukuphela okuphezulu ngokusika okufutshane kweCrew
I-Mid Fade eneNxalenye eNzima kunye neBrashi ephezulu
Ephakamileyo kunye neTight Fade kunye neCrew Cut
Ulusu luphela kunye neNqaku elifutshane eliPhezulu
Ukuphela kweBald kunye neenwele eziMhluziweyo
I-Butch Sika ngeendevu
Inxalenye enzima iphela ngesiVuno saseFrance
Ulusu oluPhakamileyo kunye oluQinisekileyo
I-Burr Sika ngeBald Fade
Ulusu olusezantsi luphela kunye noMfutshane oPhezulu
Ukuphela okuphezulu ngeBuzz Sika
Ukuphela okuphezulu kunye neWavy Brushed Back Hair
Amacandelo achetyiweyo ngeBuzz Sika phezulu kunye noyilo lweenwele
Ulusu luyaphela kunye neCandelo eliNzima
Phakathi kweBald Fade kunye noMfutshane kakhulu
izindlu zeetshathi zendalo
ilanga lam inyanga kunye nophawu oluphumayo
Itshathi ubude beenwele amadoda